ဟာဝိုင်ရီမှာလေယာဉ်ပျက်ကျတုန်းက ဗီဒီယိုကို အင်ဒိုနီးရှားလေယာဉ်ပျက်ကျတုန်းကလို့ဆိုထားတဲ့သတင်းမှား | သတင်းအချက်အလက်စိစစ်မှု
Indonesian soldiers carry items recovered from Sriwijaya Air flight SJ182 at Tanjung Priok port, north of Jakarta on January 12, 2021, found during search operations off the coast for the Boeing 737-500 which crashed into the Java Sea minutes after takeoff on January 9. (Photo by ADEK BERRY / AFP) / The erroneous mention[s] appearing in the metadata of this photo by ADEK BERRY has been modified in AFP systems in the following manner: [removing unnecessary information in second sentence]. Please immediately remove the erroneous mention[s] from all your online services and delete them from your servers. If you have been authorized by AFP to distribute them to third parties, please ensure that the same actions are carried out by them. Failure to promptly comply with these instructions will entail liability on your part for any continued or post notification usage. Therefore we thank you very much for all your attention and prompt action. We are sorry for the inconvenience this notification may cause and remain at your disposal for any further information you may require. (AFP / Adek Berry)
ဟာဝိုင်ရီမှာလေယာဉ်ပျက်ကျတုန်းက ဗီဒီယိုကို အင်ဒိုနီးရှားလေယာဉ်ပျက်ကျတုန်းကလို့ဆိုထားတဲ့သတင်းမှား
AFP မြန်မာ ပုံနှိပ်ဖော်ပြသည့်နေ့စွဲ တနင်္လာ 18 ဇန်နဝါရီ 2021 အချိန် 04:35
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၉ ရက်နေ့တုန်းက အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့မြို့တော် ဂျကာတာမှာ လေဆိပ်ကနေပျံတက်ပြီး လေးမိနစ်အကြာမှာ ပျက်ကျခဲ့တဲ့ Sriwijaya လေယာဉ်ပေါ်က ခရီးသည်တစ်ဦးရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလို့ဆိုထားတဲ့ ဗီဒီယိုတစ်ခုကို Facebook နဲ့ ဝဘ်ဆိုက်များစွာမှာ ပြန်လည်မျှဝေခဲ့ကြပြီး ကြည့်ရှုတဲ့အကြိမ်ရေ ထောင်ချီရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီအဆိုဟာ မှားယွင်းနေတာဖြစ်ပြီး ဒီဗီဒီယိုဟာ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တုန်းက ဟာဝိုင်ရီကမ်းလွန်မှာ လေယာဉ်ပျက်ကျတဲ့အကြောင်း သတင်းတွေမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီဗီဒီယိုကို Facebook ရဲ့ ဒီလင့်ခ်မှာ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၀ ရက်နေ့တုန်းက တင်ထားတာဖြစ်ပြီး ပြန်လည်မျှဝေတဲ့အကြိမ်ရေ ၈၂ ကြိမ် ရှိခဲ့ပါတယ်။
နားလည်မှုလွဲစေတဲ့ပို့စ်ကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၅ ရက်နေ့က ရယူထားတဲ့ screenshot
ဗီဒီယိုနဲ့အတူ တွဲတင်ထားတဲ့စာသားတချို့က အခုလိုဖြစ်ပါတယ်။ “အင်ဒိုနီးရှား လေယာဉ်မှူးရေထဲကိုအညင်သာဆုံးဆင်းတာပဲ လေယဉ်ပေါ်ပါခရီးသည်ရိုက်ထားတဲ့ video file လူသားချင်းစာနာသနားမိပါတယ်” (မူရင်းအတိုင်း)
လူ ၆၂ ဦးတင်ဆောင်လာတဲ့ Sriwijaya လေယာဉ်ဟာ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၉ ရက်နေ့တုန်းက ဂျာဗားပင်လယ်ထဲကို ပျက်ကျခဲ့တာဖြစ်ပြီး အဲဒီသတင်းကို AFP ရဲ့ ဒီလင့်ခ်မှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
တူညီတဲ့ပြောဆိုမှုတွေနဲ့အတူ အလားတူဗီဒီယိုကို Facebook ရဲ့ ဒီလင့်ခ်၊ ဒီလင့်ခ်၊ ဒီလင့်ခ်၊ ဒီလင့်ခ်၊ ဒီလင့်ခ်နဲ့ ဒီလင့်ခ်အပြင် ဝဘ်ဆိုက်အမျိုးမျိုးရဲ့ ဒီလင့်ခ်၊ ဒီလင့်ခ်၊ ဒီလင့်ခ်၊ ဒီလင့်ခ်နဲ့ ဒီလင့်ခ်တွေမှာလည်း တင်ထားပါသေးတယ်။
Google မှာ ဓာတ်ပုံရာဇဝင်ရှာကြည့်တဲ့အခါ ဟာဝိုင်ရီကမ်းလွန်မှာ လေယာဉ်တစ်စီးပျက်ကျတဲ့အကြောင်း သတင်းဗီဒီယိုကို ဒီလင့်ခ်မှာတွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီဗီဒီယိုကို အမေရိကန်သတင်းဌာနဖြစ်တဲ့ ABC ရဲ့ ဝဘ်ဆိုက်မှာ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၀ ရက်နေ့က တင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
သတင်းရဲ့ခေါင်းစီးက အခုလိုဖြစ်ပါတယ်။ “ဟာဝိုင်ရီမှာ လေယာဉ်ပျက်ကျတုန်း အတွင်းပိုင်းကနေရိုက်ကူးထားတဲ့ ချောက်ချားစရာဗီဒီယိုကိုကြည့်ပါ”
သတင်းပါ စာသားတချို့ကတော့ အခုလိုပါ။ “လွန်ခဲ့တဲ့လက ဟာဝိုင်ရီကမ်းလွန်မှာ အမျိုးသမီးတစ်ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့ ဗီဒီယိုမှာ လေယာဉ်ပျက်ကျတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ လေယာဉ်ထဲကနေ ခရီးသည်တွေ စနစ်တကျ ထွက်ခွာပြီး လေယာဉ်အပျက်အစီးတွေကို ဖက်တွယ်ပြီး ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေရောက်လာတဲ့အချိန်ထိစောင့်နေကြတာ တွေ့ရပါတယ်”
“အသက် ၃၉ နှစ်အရွယ် ခရီးသည် Ferdinand Puentes ဟာ 2002 Cessna Grand Caravan အမျိုးအစား လေယာဉ်ပေါ်မှာ လိုက်ပါလာခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဒီဇင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့၊ လေယာဉ်ပျက်ကျတဲ့အချိန်မှာ ခရီးသည်တွေကြုံတွေ့ရပုံကို မှတ်တမ်းတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်”
ABC သတင်းရဲ့ screenshot
ဗီဒီယိုပါမြင်ကွင်းတွေအရ လေယာဉ်ဟာ ရေပေါ်ကို မဖြစ်မနေထိုးဆင်းလိုက်ရတာကြောင့် ခရီးသည်တွေဟာ အသက်ကယ်အင်္ကျီတွေဝတ်ပြီး အရေးပေါ်ထွက်ပေါက်က ထွက်နေကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။
အလားတူဗီဒီယိုကိုပဲ ABC သတင်းဌာနရဲ့ YouTube channel ဒီလင့်ခ်မှာ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၀ ရက်နေ့က တင်ထားပါတယ်။
အောက်မှာ နားလည်မှုလွဲစေတဲ့ဗီဒီယို (ဘယ်) နဲ့ ABC သတင်းပါဗီဒီယို (ညာ) တို့ကို နှိုင်းယှဉ်ပြထားတဲ့ screenshot ဖြစ်ပါတယ်။